Microsoft inova nhengo nyowani yeLinux foundation | Linux Vakapindwa muropa
Ehe, iwe unoverenga izvo nenzira kwayo, iri harisi joki mune yakashata kuravira kana kuratidzira kweZuva raApril Benzi. Microsoft ikozvino inhengo izere yeiyo Linux hwaro, chimwe chinhu icho kusvika nguva pfupi yadarika chinoita sechisingabviri, kupokana kwechokwadi.
Nekudaro, nekuda kwemaitiro achangoburwa akave naMicrosoft mumakore apfuura, chaizvo izvi hazvishamise sezvazvinoratidzika. Sezvo vanhu vakaita saSatya Nadella vari mutariri weMicrosoft, kambani iyi yakakanda zvimwe zvakawanda zvemahara software, ichisimbisa mubatanidzwa nemaitiro anoshanda se Ubuntu kana kutogadzira yako yekugovera, Microsoft Azure.
Zvakare, uku hakusi kugara uchigara, sezvo Microsoft rave chikamu cheboka rakasarudzwa renhengo dzeplatinum, boka rine semakambani ane mbiri akadai seIntel, Huawei, Samsung, IBM neCisco pakati pevamwe.
Nemubatanidzwa uyu, zvinosimbiswa izvozvo Hondo pakati peMicrosoft neLinux hwaro yakavigwa izvozvi, kuratidza kuti software yemahara neMicrosoft zvinogona kugara pamwe murunyararo uye kubatsirana panzvimbo pekuyedza kuparadza mumwe nemumwe.
Pasina kupokana nhau hombe dzakabata vazhinji nekushamisika, asi vamwe kwete zvakanyanya, kubvira Azure nemibatanidzwa naUbuntu vanongova chikamu chidiki yemabatiro ainoita Microsoft izvozvi mune nyaya yemahara software. Semuenzaniso, zvibvumirano zvakaitwa nekambani hombe SUSE, bhurawuza racho rakabatanidzwa Edge paLinux uye yakagadzirwawo SQL Server yeLinux pakati pezvimwe zvakawanda nhau.
Ndinotenda zvechokwadi mubatanidzwa uyu unobatsira munhu wese, nekuti kunyangwe hazvo vanhu vazhinji vasingade Windows kana chero chinhu chine chekuita nekambani yeRedmond, zviri pachena kuti ikambani huru inogona kupa rutsigiro rwakakura rwemari kunheyo uye nekudaro ichiita kuti nyika yeLinux iende ichibatsirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Microsoft inova nhengo nyowani yeiyo Linux hwaro
Ini ndinofunga Microsoft inoiona sechirevo "chengetedza shamwari dzako padyo, asi zvakanyanya padhuze nevavengi vako"
Ivo vaisakwanisa kubva kunze uye ipapo vaizoedza kubva mukati.
chokwadi ndechekuti kukuvara kwavanogona kubva mukati kuri kukuru.
izvi zvinondipa kusanzwisisa,
Chii icho gehena iro mocosoft inotipa? hapana kana chinhu, nekuti chokwadi chandisingachinzwisise.
Ichave iri nyaya yeiyo GNU / HURD chirongwa chichigadzikana izvozvi!
Izvo microsft inoda kuendesa windows windows server kune linux kernel. Nguva ichandiratidza chaizvo!
Daniel Augusto Urueña Varón akadaro
Ini ndinobvumirana nezvakataurwa uye zvinondinetsa ini kuti nyaya yekuramba kwedu Microsoft inorerutswa, kunze kwekududzira zvisizvo. Dambudziko neMicrosoft nderekuti uzivi hwayo hwakapesana zvakanyanya neiyo yemahara software, iyo inoratidzwa mune yekuti kunyangwe "mahara" kana inoenderana Gnu / Linux zvigadzirwa zvine PRIVATE marezinesi. Izvi zvinogara zvichipinda muMicrosoft mune yemahara software nharaunda zvinongogadzirirwa kuwana kugamuchirwa nevaya vakauya pasi rino vasinganzwisise huzivi hwayo uye kukosha kwayo kwetsika, ndosaka ndichigara ndichiti «iyo FSF haikurumidzi nenyaya iyoyo yekubiridzira, ndeyekuti ndiyo yepakati poindi yemahara software, kudzivirira rusununguko, kwete kubvumidza hunyanzvi hwehutapwa ». Asi zvinosuwisa kuti zvinofungidzirwa kuti rusununguko kubvumidza chero chinhu, kunyangwe kubviswa kwerusununguko pachacho uye ivo vanotidaidza isu vevanopfurikidza mwero, ikozvino padanho rino tichava nenzvimbo "Yemahara" izere nedzimwe nzira dzekuviga, izvo zvichatungamira vanhu neupenzi uchizviti software yezvako ndeye mahara nekuti inoshanda paGnu / Linux.
PDT: Ini ndiri mugadziri mukambani yemumwe wevashandi veMicrosoft uye mushandisi akatendeka weGnu / Linux mumba mangu nemhuri yangu uye handimbofa ndakashandisa mumba mangu zvandinovandudza mukambani ino, ndinosarudza kuramba ndichiita mipiro yangu yekusimudzira kune imwe kana imwe chirongwa chemahara software.
Pindura kuna Daniel Augusto Urueña Varón
Pakatanga nettop neatomu yavo inopisa, kudzikisa mutengo ivo vakabuda neyakajeka GNU / Linux distros, vamwe vachangoti vatenge ndakazvimisikidza ndikaisa win xp (pasina kuhwina kwavo havagone kurarama), vamwe pachinzvimbo vakavapa mukana. distros iyo yakabva kwakatangira uye ndokuona kuti vaishanda futi kana zvirinani pane nema windows.
MuMicrosoft vakaona nzeve dzemhumhi (ndinofunga), vangangove vatengi vaizoona kuti vanogona kuita zvakafanana neWindows, yakachipa uye inogadziriswa. Pindura, wedzera rutsigiro rweOS iyo yavanofunga kurega "win xp" kwemamwe makore mazhinji, kudzikisa marezinesi evanounganidza michina kumatengo asina kumboonekwa uye vagokwanisa kukwikwidza nevehupfumi neGNU / Linux.
Makuru makuru pc vanounganidzwa kuti vangoisa kuhwina chete, iwo mashoma anoedza kubuda mujoko anodzoka munguva pfupi.
Munguva pfupi yapfuura mune yakazara boom ye android, rwizi uye raspibheri pis, pavanoburitsa yavo nyowani kuhwina 9, ndine hurombo kuhwina 10;), ivo vanoisa iyo yekuburitswa yemahara kubva kwete kwete chete kuhwina 8 asi yatove iyo yekare kuhwina 7, chimwe chinhu chisingaenzaniswi muhwindo $.
Zvino vava nhengo dzeLinux Foundation ……. Handizive, moyo yavo yanyoroveswa here, iyi "NGO" inonzi Micro $ oft? hehehehehehe.